FSX Faahfaahin buuxda oo dhamaystiran oo ku saabsan habka dhismaha
Su'aal FSX Faahfaahin buuxda oo dhamaystiran oo ku saabsan habka dhismaha
maalin 1 sano ka hor 1 #980 by DRCW
Tani waxaa bixiyay ESP kaasoo sameeyay habka FSX. Waxaad u baahan doontaa inaad tixraacdo boggan oo aad nuqul ka haysato dukumintiyadaada.
Xogtaas samafalka waa run ahaantii waa xaddidaadda awooddaada aad ku sameyn karto isbeddelka diyaaradahaaga iyo wixii ka baxsan.
maalin 1 sano ka hor 1 #981 by Gh0stRider203
oh, sidaa darteed waxaan u qalabeyn karaa 777 Xanuunkan kadib? macaan! ^ _ ^ lol
maalin 1 sano ka hor 1 #982 by Gh0stRider203
Xaqiiqdii waxaan qabaa hal shay oo laga yaabo inaad awood u leedahay inaad i caawiso ....
sidee boodbood ku dhejin karaa meelihii baarkinka ee garoonka diyaaradaha? Gaar ahaan, qaar ka mid ah KDFW horteeda ee Diyaaradaha Mareykanka 'Dayactirka Hangar #5 prnt.sc/ie8djp
maalin 1 sano ka hor 1 - maalin 1 sano ka hor 1 #983 by DRCW
Tani waa aag aan si dhab ah ugu dhexmuuqnayn FSX, waxaan hadda badinayaa P3Dv4 kaas oo muddo dheer sugayay 64 barta ESP. Halkan waxaa ah fiidiyo layiraahdo waxaan helay taas oo faa'iido leh. Anigu ma aan helin wakhti aan ku isticmaalo, laakiin dhammaan fiidiyowyada ayaan eegay, tanina waxay u muuqataa inay si fiican u sharxi doonto
Last edit: 1 sanad 1 maalin kahor DRCW.
maalin 1 sano ka hor 1 #988 by DRCW
Halkan waxaa ku qoran tusaale tijaabo ah oo aad ka heshay qayb ka mid ah gawaarida caadiga ah ee gawaarida gawaarida ee CFG autopilot
shidaal_flow_gain = 0.002 // U faa'iidi socodka shidaalka
inlet_area = 19.6 // Goobta wareegga, gawaarida nacelle gawaarida
rated_N2_rpm = 29920 // RPM, heerka labaad ee kombuyuutarka lagu qiimeeyay
afterburner_available = 0 // Afterburner la heli karaa?
reverser_available = 1 // Dib-u-celiye xaddidan?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.385 // Isticmaalka shidaalka gaarka ah (Jets)
Ka dib markiiBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0 // TSFC oo leh dib-u-soo-kabasho
XADIISKA waa in la dhigaa = 1) 0 macnaheedu waa been ah oo 1 macnaheedu waa run, Waxaa laga yaabaa inaad kordhiso matoorka aad 'Static_ Thrust = settings sidoo kale. Anigu waxaan abuuri doonaa boostada mawduucan si dhakhso ah.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.270